बर्लिन तीन दिनमा | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | बर्लिन, के हेर्ने
कम्तिमा पहिलो पटक शहर जान्नको लागि तीन दिन राम्रो औसत हो। जब हामी धेरै शहरहरू वा धेरै देशहरू भ्रमण गर्ने योजना गर्छौं, यूरोपमा जो सबै नजिक छ, तीन दिन प्राय: जसो हामी राजधानीहरूलाई समर्पण गर्छौं।
स्पष्ट रूपमा धेरैले यसलाई थोरै पाउनेछन् र अरूहरू केवल र आवश्यक। इमान्दारीपूर्वक, तीन दिन धेरै लामो छैन, तर यसले हामीलाई अझ महत्त्वपूर्ण वा पर्यटक आकर्षणहरू राम्रोसँग हेर्नको लागि यसले अझ पछि फिर्ता आउन लायक छ कि छैन हेर्नको लागि अनुमति दिन्छ। त्यसोभए हामी के गर्न सक्छौं हेरौं बर्लिनलाई तीन दिनमा जान्नुहोस्।
2 बर्लिनमा के हेर्ने
तपाईंले त्यो बर्लिन जान्नुपर्दछ यो युरोपमा दोस्रो सबैभन्दा अधिक जनसंख्या भएको शहर हो लन्डन पछाडि, साढे तीन लाख भन्दा बढी मानिस बसोबास गर्छन्। यो देशको पूर्वोत्तरमा हवेल र स्प्रे नदीहरूको किनारमा अवस्थित छ।
यो शताब्दीहरु को इतिहास छ र यो राज्य, साम्राज्य, गणतन्त्र र स्पष्टतः कुख्यात तेस्रो राइकको केन्द्रको रूपमा चिनिन्छ। यसबाहेक, केहि दशकहरु को लागी यो दुई विचारधारा, राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीहरु बीच विभाजित शहर भएको छ: साम्यवाद र पूँजीवाद। र मानौं यदि पर्खालको पतन पछि यो पर्याप्त थिएन, यो पुनर्मिलनको समयमा यो देशको मुटु हो र यसले जर्मनीको पुनर्जन्मलाई आजको औद्योगिक शक्तिको रूपमा चिनाउँछ।
बर्लिन चिसो जाडो छ, कहिलेकाँही शून्य भन्दा तल डिग्री संग, र चिसो डिसेम्बर र मार्च को बीच हिउँ संग वसन्त सम्म रहन्छ। ग्रीष्म ,तु, अर्कोतर्फ तातो हुँदैन र औसत तापमान º० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्दैन।
हामीले भनेका थियौं, शहर भ्रमण गर्न हामीसँग तीन दिन छ, 72 घण्टा। त्यसोभए हामीलाई के मनपर्दछ भनेर पहिल्यै जान्न सजिलो हुन्छ। के हामी संग्रहालयहरू, कला ग्यालरीहरू, ऐतिहासिक साइटहरू, फेशन, ग्यास्ट्रोनोमी ... लाई मन पराउँछौं? र यदि हामीले निर्णय गरेनौं भने हामी एउटा बनाउन सक्छौं पोटपुरी गन्तव्यहरु र चासो को र अधिक या कम नजिक को लागी सबै को आदेश।
उदाहरणका लागि, पहिलो दिन हामी ब्रान्डरबर्ग गेट, युरोपमा मारिएका यहूदीहरूका लागि स्मारक, फुहाररको बंकर, पोट्सडामर स्क्वायर, टोरोग्राफी टेरोर प्रदर्शनी र प्रसिद्ध चेकपोइन्ट चार्ली, सैन्य चौकी भ्रमण गर्न सक्छौं।
ब्रान्डरबर्ग गेट: यो १1788 र १1791 XNUMX १ बीचमा निर्माण गरिएको थियो र यो पहिलो भवन थियो पुनरुद्धार शहरमा ग्रीक। यो कार्ल गोथार्ड लान्घान्स नाम गरेको आर्किटेक्टले निर्माण गरेका थिए जसले प्रशिया अदालतमा काम गरेका थिए र एथेन्सको एक्रोपोलिसमा प्रवेश गरेको स्मारकबाट प्रेरित भएको थियो। छ २ meters मिटर अग्लो र .26 65..5 मिटर लामो छ विशाल र मजबूत डोरिक स्तम्भहरूका दुई ब्लकहरूको साथ। १ 1793 1814 In मा उनीहरूले रथ राखे जुन नेपोलियन शहरमा पस्दा युद्ध लुटेर पेरिस लगे र यो १ which१ in मा मात्र फर्के। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि जर्मनीको विभाजनपछि ब्रान्डनबर्ग गेट soviet पक्ष मा बसे र सन् १ 1961 in१ मा पर्खालको निर्माण पछि यो बहिष्कार क्षेत्रको रूपमा रह्यो त्यसैले दशकौंसम्म कोही पनि यसलाई हेर्न सक्दैनन्। यो १ 1989। Only मा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
युरोपका मृत यहूदीहरूको स्मारक- छ लाख मानिस मारिएका यहूदीलाई सम्मान गर्दछ र प्रवेश निःशुल्क छ। त्यहाँ एउटा उत्कृष्ट प्रदर्शन सूचना केन्द्रमा। यो कोरा-बर्लिनर स्ट्रासे, १ मा अवस्थित छ।
हिटलरको बन्कर: बन्कर पोट्सडामर स्क्वायर र ब्रान्डरबर्ग गेटको बीचमा थियो र आज साइटमा सोभियत युगबाट १ 80 s० को दशकदेखि भवन रहेको छ। दिनको समयमा त्यहाँ पर्यटक पदयात्रा छ तिनीहरू पार्कि lotबाट सुरू हुन्छन् जुन बन्करमा प्रवेश द्वार हुन्छन् जहाँ पस्न सम्भव छैन। यदि तपाइँ बkers्करहरू मनपराउनुहुन्छ भने शहरमा अरू पनि छन् जुन भ्रमण गर्न सकिन्छ।
Potsdamer वर्ग: यो एक हो बर्लिनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक वर्ग र ब्रान्डरबर्ग गेटबाट एक किलोमिटर टाढा छ। यसको नाम पोत्सडेम शहरको नाममा राखिएको छ र २० औं शताब्दीको सुरूमा यो जर्मन राजधानीको व्यस्त ठाउँमध्ये एक हो।
आतंकको स्थलाकृति: यो प्रदर्शनी धेरै भ्रमण गरिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कागजात केन्द्र यसले स्पष्ट पार्छ नाज सरकार अन्तर्गत भएको सबै कुराम यहाँ त्यो समयमा राज्य गुप्त पुलिसको मुख्यालय, SS, र सुरक्षा कार्यालय। स्थायी प्रदर्शनीले यससँग ठ्याक्कै मिल्छ, यद्यपि त्यहाँ अन्य अस्थायी प्रदर्शनहरू पनि छन्। यो Niederkirchnerstrasse, 8 मा स्थित छ। यो बिहान १० देखि साँझ 10 सम्म खुल्छ र प्रवेश निःशुल्क छ.
चेकपोइन्ट चार्ली: शित युद्दको बखत यो पूर्वी सैनिकलाई पश्चिम बर्लिनबाट विभाजित गर्ने सैन्य पोष्ट थियो। पुनर्मिलन पछि सानो भवन पर्यटकहरूको आकर्षण बन्न पुग्यो र आज यो डलेम नजिकैको एलाइड संग्रहालयमा छ, किनकि यो सारियो र मूल साइटमा तपाईले एउटा मात्र चिन्ह देखाउनुहुनेछ।
El दोस्रो दिन हामी टापुको संग्रहालय, बर्लिन टिभी टावर, अलेक्ज्याण्डरप्लट्ज, सोभियत युद्ध स्मारक, ओबरबम्ब्रोक्के ब्रिज र पूर्वी ग्यालरीको भ्रमण गर्न सक्छौं।
टापु संग्रहालय: लाई दिइएको नाम हो उत्तरी आधा टापुको नदी Spree मा। यहाँ धेरै छन् संग्रहालयहरू अन्तर्राष्ट्रिय कोटीको र १ 1999 XNUMX। देखि यस क्षेत्रलाई मानिन्छ विश्व सम्पदा।
बर्लिन टिभी टावर: यो संग १ 368 मिटर अग्लो र १ 1969 XNUMX from बाट मिति। यो एक धेरै भ्रमण गरिएको साइट हो त्यसैले त्यहाँ जानको लागि धेरै मानिसहरू पर्खिरहेका हुन सक्छन्। दृश्यहरू उत्तम छन् र माथिल्लो तलामा क्याफे छ, जुन आधा घण्टामा पूर्ण घेरामा चल्दछ। यो अलेक्ज्याण्डरप्लाज नजिक छ।
सोभियत युद्ध स्मारक- यो बीचमा ट्र्याप्टवर पार्कमा छ, र यो WWII पछि निर्माण गरिएको थियो र घरहरू राख्छ Soviet०० सोभियत सेनाका कब्रहरू.
ओबरबाम्ब्रोक्के ब्रिज: यो एक को बारे मा छ नदी Spree मा डबल डेकर पुल र यो बर्लिनको प्रतीक हो। सोभियत कालमा यो दुबै पक्ष बीचको सीमा थियो र पुनर्मिलन पछि यसलाई पुनःस्थापित गरियो र एउटा नयाँ खण्ड प्रसिद्ध स्पेनी वास्तुकार स्यान्टियागो कालाट्राभाद्वारा डिजाइन गरिएको थियो।
पूर्वी ग्यालरी: बर्लिन भित्ताको के बाँकी छ, सबैभन्दा लामो खण्ड र माइल-बिजोर लम्बाइको साथ १०० भन्दा बढी भित्ताहरू सहित विश्वको सबैभन्दा ठूलो खुला-एयर ग्यालेरी जुन रिभर स्प्रेसँग समानान्तर चल्दछ।
र अन्तमा बर्लिनमा तीन दिन यो भिक्ट्री कॉलम र टिगर्टेन पार्क, कैसन विल्हेल्म मेमोरियल चर्च र रेखस्टाग भवनको पालो हो।
Reichstag: यो जर्मन संसद हो र भ्रमण गर्न सकिन्छ पूर्व दर्ता संग। बगैंचा र रेस्टुरेन्टको साथ टेरेसमा एक ऐतिहासिक प्रदर्शन र आधुनिक गिलास डोम छ। को टावर तिनीहरू आधा घण्टा अन्तिम र अंग्रेजी, इटालियन र फ्रेन्चमा छन्। प्रदर्शनी आइतवार बिहान १० देखि साँझ 10 सम्म खुल्ला रहन्छ।
विजय स्तम्भ र टियरगार्टन पार्क: यो पार्क बर्लिनमा धेरै लोकप्रिय छ र छ Hect hect हेक्टर र इतिहासको शताब्दी। यसको अंशको लागि, विक्ट्री स्तम्भ १ th औं शताब्दीको हो र प्रशिया-डेनिश युद्धमा प्रशियाको जीतको सम्झना गर्दछ। छ अवलोकन डेकयो पालिश रातो ग्रेनाइटबाट बनेको छ र यसमा एउटा हल र स्तम्भहरू छन् र एक सुन्दर भित्ति चित्रकला र कांस्य राहतहरूको। सुरुमा यो रेखस्टागको अगाडि थियो तर पछि यसलाई टायरगार्टनमा हस्तान्तरण गरियो र हुनसक्छ यसले यसलाई बमहरूबाट बचायो।
यी महत्त्वपूर्ण साइटहरूमा तपाईं एक दिन सेन्ट हेडविगको क्याथेड्रल, बर्लिनर डोम र रंगीन ह्याकिचेर बजारमा भ्रमण थप्न सक्नुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा तपाई पर्यटक यात्री या बाइक टुरका लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ जुन धेरै मनोरन्जनात्मक छ। त्यहाँ ग्यास्ट्रोनोमिकहरू पनि छन्, यदि तपाईं नयाँ स्वाद प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » बर्लिन » बर्लिन तीन दिनमा